Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း)
Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Diphenhydramine ကို အသေးစားမီးလောင်ခြင်း ၊ ရှမိခြင်း ၊ ခြစ်မိခြင်း ၊ နေလောင်ခြင်း ၊ အင်းစက်ကိုက်ခြင်း ၊အသေးစားအရေပြားယားယံမှုများ ၊ ivy ,oak , sumac ခေါ်အဆိပ်ရှိပင်များကြောင့်ဖြစ်သော အနီကွက်များ တွင်အသုံးပြုပါသည် ။Diphenhydramine ဆေးသည် antjhistamine ဆေးအုပ်စုထဲတွင်ပါဝင်ပါသည် ။ သူဟာ ယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေသောhistamine ရဲ့အာနိသင်ကို ပိတ်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီဆေးဟာ မျက်ရည်ထွက်ခြင်း ၊ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းများကိုသက်သာစေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဆေးဗူးတွင်ပါဝင်သော အညွှန်းကို အသေးစိတ်သိရှိစေရန် ဖတ်ရပါမည် ။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆေးပုံစံ ၊အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ၂ နှစ် သို့ ၆ နှစ် သို့ ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးများ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ အသုံးမပြုသင့်ကြောင်းကို ဆေးဗူးအညွှန်းတွင်ပါရှိပါသည် ။ ကိုယ့်ဘာသာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့သင့်အတွက်စိတ်ချရစေဖို့ ဆေးအညွှန်းကိုသေချာဖတ်ရန်လိုအပ်ပါသည် ။
Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အရေပြားပေါ်တွင်သာသုံးသင့်ပါသည် ။ ကိုယ့်ဘာသာအသုံးပြုရင်တော့ ဆေးအညွှန်းကိုသေချာဖတ်ရန်လိုအပ်ပါသည် ။ ဆေးအညွှန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းတာရှိရင်တော့ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းရပါမယ် ။
အချို့ဆေးတွေဟာအသုံးမပြုခင်လှုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည် ။ ဆေးမလိမ်းခင် ရောဂါနေရာကို ဆပ်ပြာနှင့် ရေနဲ့သေချာဆေးကြောရန်လိုအပ်ပါသည် ။ ထို့နောက် ခြောက်အောင်စောင့်ရပါမည် ။ ရောဂါဖြစ်သည့်နေရာကို ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း လိမ်း၍ တနေ့ကို ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်ထက်ပို၍မလိမ်းရပါ ။ ဆေးလိမ်းပြီးလျှင် ရောဂါနေရာကို လက်နဲ့မထိရင်တောင်မှလက်များကိုဆေးကြောရပါမည် ။ ဆေးကို ကိုယ်ပေါ်တွင်နေရာအများကြီးမလိမ်းရပါဘူး သို့ ညွှန်ကြားထားတာထက် ပိုအသုံးပြုခြင်းမျိုူမလုပ်ရပါဘူး ။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့အနာကိုမြန်မြန်သက်သာလာစေမှာမဟုတ်သလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလည်းပိုဆိုးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကို မျက်လုံး ၊နှာခေါင်း ၊ နား နှင့် ပါးစပ်ထဲသို့မဝင်စေရန် ဂရုစိုက်ရပါမယ် ။
အကယ်၍ ဝင်ခဲ့လျှင် ချက်ချင်းထုတ်ပစ်ပြီး ရေနဲ့ဆေးကြောပစ်ရပါမယ် ။၇ ရက်ကြာသည်အထိမသက်သာလျှင်ဖြစ်စေ ၊ ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ အနာပြန်ပေါ်လာလျှင်ဖြစ်စေ ဆေးအသုံးပြုခြင်းရပ်တန့်ခြင်း သို့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရပါမယ် ။ ရောဂါအခြေအနေပြင်းထန်သည်ဟုထင်ရလျှင် ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူရပါမည် ။
Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးကို အလင်းရောင်များ၊ စိုစွတ်မှုများနှင့်ဝေးရာ အခန်းအပူချိန်အတွင်းမှာသာထားသင့်ပါသည်။ ဆေစကိုပျက်ဆီးခြင်းမဖြစ်စေရန် ရေခဲသေတ္တာ ၊ ရေချိုးခန်းထဲတွင်မထားရပါ ။diphenhydramine ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံကွဲပြားကြပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဆေးဗူးပါဆေးညွှန်းကိုသေချာဖတ်ခြင်း သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုမေးမြန်းခြင်းလုပ်ရပါမယ်။ ဆေးများကိုလည်း ကလေးများနဲ့ဝေးရာမှာထားရပါမယ် ။
ဆေးကို အိမ်သာ သို့ ရေမြောင်းထဲသို့ ညွှန်ကြားမထားပဲ မပစ်ရပါဘူး ။ ဆေးဒိတ်လွန်သွားလျှင် သို့ နောက်ထပ်မလိုတော့လျှင် သေချာစွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သေသေချာချာဆေးကိုစွန့်ပစ်နည်းကိုဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့မေးမြန်းတိုင်ပင်ရပါမယ်။
Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်ဟာ diphenhydramine သို့အခြားဆေးတစ်ခုခုနဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမည်။ ညွှန်ကြားထားသော သို့ မညွှန်ကြားထားသော ဆေးကုသမှုများ ၊ ဗီတာမင်များ ၊ အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်များကို အသုံးပြုနေခြင်း သို့ အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားခြင်းရှိပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပြထားရပါမယ်။
– အရေပြားတွင်ပင်လိမ်းသော အခြား diphenhydramine ထုတ်ကုန်များ ၊
– အအေးမိခြင်း ၊ဖျားခြင်းအတွက်ဆေးသောက်သုံးနေခြင်းများ၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း ၊ စိတ်မငြိမ်ခြင်း ၊တက်ခြင်းများအတွက်ဆေးသုံးစွဲနေခြင်းများ ၊ ကြွက်သားပြေလျော့ဆေးများ ၊ နာကျင်မှုများအတွက်သုံးသော narcotic ဆေးများ ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးများ ၊ အိပ်ဆေးများ ။ သင်ဟာဒါတွေသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကို အရင်ပြောပြရပါမယ်။
အကယ်၍သင့်တွင် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ၊ အသက်ရှူမဝခြင်း ၊နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း ၊အခြား အဆုတ်ရောဂါများရှိခြင်း ၊ ရေတိမ်ရှိခြင်း ၊အနာများရှိခြင်း ၊ဆီးသွားရန်ခက်ခဲခြင်း ၊ နှလုံးရောဂါများရှိခြင်း ၊သွေးပေါင်တက်ခြင်း ၊ တက် တက်ခြင်း ၊ သိုင်းရွက်ဂလင်း အရမ်းအလုပ်လုပ်နေခြင်း တွေရှိနေလျှင်တော့ဆရာဝန်ကို ပြောပြထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ သင်ဟာ ဆေးအရည်ကိုသုံးမယ်ဆိုလျှင် သင့်ကိုလည်း ဆားနည်းသောအစားအစာကိုသာစားရန်ညွှန်ကြားထားလျှင် ဆရာဝန်ကို အရင်ပြောပြရပါမယ် ။
အကယ်၍သင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလျှင် သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့ နို့တိုက်မိခငိဖြစ်နေလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြရပါမယ် ။ အကယ် ၍သင်ဟာ ဆေးသုံးစွဲနေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့လျှင် ဆရာဝန်ကိုခေါ်၍ပြသရပါမည် ။ အကယ်၍သင်ဟာ အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက်ဖြစ်လျှင် ဆေးရဲ့ကောင်းကျိုး ၊ ဆိုးကျိုးများကိုညဆရာဝန်နဲ့မေးမြန်းရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကတော့ ဒီဆေးကိုမသုံးသင့်ပါဘူး ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဆေးဟာ အခြားဆေးတွေလို ရောဂါအတူတူချင်းမှာတောင် စိတ်မချရနိုင်လို့ပါ ။ သင်ဟာ ခွဲစိတ်မှုခံယူမည်ဆိုလျှင် (သွားနှုတ်တာကအစ ပါဝင်ပါတယ်)တော့ ဆရာဝန်ကိုညdiphenhydraminebသုံးစွဲနေကြောင်း ပြောပြရပါမယ် ။ ဒီဆေးဟာသင့်ကိုအိပ်ငိုက်ထိုင်းမှိုင်းစေတယ်ဆိုတာ သိထားရပါမယ် ။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ ကားမောင်းခြင်း ၊းက်ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ ။ ဆေးသုံးစွဲနေချိန်မှာ အရက်သေစာများကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ရပါမည် ။ အကယ်၍ သင့်တွင် phenylketouria ( ကျပ်မပြည့်ခြင်း မဖြစ်စေရန် အစားအစာသီးသန့်စားနေရခြင်း)ရှိပါက diphenhydramine ပါသော ဝါးစားလို့ရတဲ့ဆေးပြားတွေမှာ ချိုစေရန် aspartame ( phenylalanine အရင်းအမြစ်တစ်ခု) ထည့်ထားသည်ကို သိထားရပါမယ် ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့ နို့တိုက်စဉ်မှာ ဆေးသုံးစွဲခြင်းဟာ စိတ်ချရကြောင်းကို လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေသေသေချာချာမလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် မသုံးစွဲမီဆေးရဲ့ကောင်းကျိုး ၊ဆိုးကျိုးများကို သိရှိစေရန် ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ရပါမယ် ။
Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အဖြစ်များတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း ၊မူးဝေခြင်း ၊ ပါးစပ်နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွင် ခြောက်သွေ့နေခြင်း ၊ အစာအိမ်မအီမသာဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ် ။ အခြား အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း ၊ ၂ ထပ်မြင်ခြင်း ၊ တုန်ခြင်း ၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်းနဲ့ မူးဝေခြင်းတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ် ။
အကယ်၍သင့်တွင် ဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုများ ( အသက်ရှူကျပ်ခြင်း ၊ လည်ချောင်းတွင်ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၊ လျှာ ၊နှုတ်ခမ်း နှင့် မျက်နှာများ ဖူးရောင်လာခြင်း) ရှိလာလျှင် ဆေးကိုမသုံးစွဲတော့ပဲ ဆရာဝန်နဲ့ပြသရပါမယ် ။ အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အသေးစားတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ။ အက
်၍သင့်တွင် အိပ်ငိုက်ခြင်း ၊ ပင်ပန်းနွယ်းနယ်ခြင်း ၊ မူးဝေခြင် ၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပါးစပ်များခြောက်သွေ့ခြင်၊ ဆီးသွားရခက်ခဲခြင်း သို့ ပရောစတိတ်ဂလင်းကြီးခြင်း တို့လောက်ပဲဖြစ်လျှင်တော့ ဆေးကိုဆက်သုံးစွဲပြီး ဆရာဝန်ကိုပြောပြရပါမယ် ။
လူတိုင်းတော့ ဆိုးကျိုးတွေကိုမခံစားကြရပါဘူး ။ အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ် ။ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့မေးမြန်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ် ။
ဘယ်ဆေးတွေက Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Diphenhydramine ဟာ သင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီး ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံတွေပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးအချင်းချင်းမတည့်တာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆေးတွေကိုစာရင်းပြုလုပ်ထားပြီးဆရာဝန်ကိုအသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဆေးများစတင်သုံးစွဲခြင်း ၊ရပ်တန့်ခြင်း သို့ ဆေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
သင့်ကိုအိပ်ချင်စေတဲ့ ၊အသက်ရှူရပိုဆိုးစေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ diphenhydramine ကိုတွဲသောက်ခြင်းဟာဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ် ။ အကယ်၍သင်ဟာ diphenhydramine ကို စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း ၊စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း ၊ အတက်ရောဂါများအတွက်အသုံးပြုသောဆေးများနဲ့တွဲသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ် ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Diphenhydramine ဟာ အစားအစာတွေ အရက်တွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်း သို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုဆိုးစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဆေးမသုံးစွဲမီ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Diphenhydram ine ဟာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သက်ရောက်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်ရောက်ခြင်းဟာ ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံ သို့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုပြီးဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာရှိနေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန်ကိုအသိပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Extrapyramidal စနစ်နှင့် သက်ရောက်မှုရှိစေရန် ကြွက်သားထဲနှင့် သွေးပြန်ကြောထဲကို ဆေး 50 mg ထိုးကြပါတယ် ။ ဆေးပမာဏကို လိုအပ်လျှင် 100 mg မှ 400 mg အထိတိုးနိုင်ပါတယ် ။ ပါးစပ်မှသောက်သုံးမည်ဆိုလျှင်တော့ 25mg ကနေ 50 mg အထိကို ၆ နာရီ သို့ ၈ နာရီကြာတိုင်းသောက်သုံးရပါမည် ။
အရွယ်ရောက်ပြီးအိပ်မပျော်သူများအတွက်ဆေးပမာဏ – အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် 25 mg မှ 50 mg အထိသောက်သုံးရပါမည် ။
အရွယ်ရောက်ပြီးမူးဝေသူများအတွက်ဆေးပမာဏ – ကြွက်သားထဲနှင့် သွေးပြန်ကြောထဲကို ဆေး 50 mg ထိုးကြပါတယ် ။ ဆေးပမာဏကို လိုအပ်လျှင် 100 mg မှ 400 mg အထိတိုးနိုင်ပါတယ် ။
ပါးစပ်မှသောက်သုံးမည်ဆိုလျှင်တော့ 25mg ကနေ 50 mg အထိကို ၆ နာရီ သို့ ၈ နာရီကြာတိုင်းသောက်သုံးရပါမည်။
ဆေးကိုခရီးမသွားခင် ၊ အစာမစားခင် နဲ့မလှုပ်ရှားခင်တို့မှာ မိနစ် ၃၀ ကြို၍သောက်သုံးရပါမည် ။
အရွယ်ရောက်ပြီး အအေးမိခြင်းအတွက်ဆေးပမာဏ – ဆေး 25 mg မှ 50 mg အထိကို၄ နာရီသို့ ၆ နာရီခြားတိုင်းသောက်သုံးရပါမည် ။၂၄ နာရီအတွင်းမှာ300.mg ထက်ပိုမသောက်ရပါဘူး ။
အရွယ်ရောက်ပြီးယားယံသူများအတွက်ဆေးပမာဏ – 25 mg မှ 50 mg အထိကို၄ နာရီသို့ ၆ နာရီခြားတိုင်းသောက်သုံးရပါမည် ။၂၄ နာရီအတွင်းမှာ300.mg ထက်ပိုမသောက်ရပါဘူး ။
အရွယ်ရောက်ပြီးအသားအရေနီမြန်း၍ ယားယံသူများအတွက်ဆေးပမာဏ,- 25 mg မှ 50 mg အထိကို၄ နာရီသို့ ၆ နာရီခြားတိုင်းသောက်သုံးရပါမည် ။၂၄ နာရီအတွင်းမှာ300.mg ထက်ပိုမသောက်ရပါဘူး ။
ကလေးတွေအတွက် Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးများနှာစေးခြင်း၊အအေးမိခြင်း ၊ချောင်းဆိုးခြင်းတွင်သုံးသောဆေးပမာဏ ။
– ၂ နှစ်မှ ၆ နှစ်အထိကလေးများတွင် 6.25 mg ကို ပါးစပ်မှတစ်ဆင့် ၄ နာရီ သို့ ၆ နာရီခြားတိုင်း၊ တနေ့ကို 37.5 mg ထက်မပိုစေပဲ သောက်သုံးရပါမည်။
– ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိကလေးများတွင် 12.5 mg မှ 25 mgကို ပါးစပ်မှတစ်ဆင့် ၄ နာရီ သို့ ၆ နာရီခြားတိုင်း၊ တနေ့ကို 150 mg ထက်မပိုစေပဲ သောက်သုံးရပါမည်။
– ၁၂ နှစ်အထက်ကလေးများတွင် 25mg မှ 50mg အထိဆေးပမာဏကို ပါးစပ်မှတစ်ဆင့်၄ နာရီ သို့ ၆ နာရီခြားတိုင်း ၊တနေ့ကို 300 mg ထက်မပိုစေပဲသောက်သုံးရပါမယ် ။
ကလေးများတွင်အိပ်မပျော်ခြင်းအတွက်ဆေးပမာဏ- ၁၂ သို့ ၁၂ အထက်ကလေးများတွင် 25 mg မှ 50 mg အထိကို အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင်သောက်သုံးရပါမည် ။
Extrapyramidal စနစ်ကိုသက်ရောက်မှုရှိစေရန်သုံးသောေးဆပမာဏ- ပုံမှန်မဟုတ်သော ခန္ဓါကိုယ်နှင့် ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုများတွင်1 to2mg/kg ေးဆပမာဏကို ကြွက်သားထဲသို့ သွေးပြန်ကြောထဲတွင်သွင်းရပါမည် ။
တုံ့ပြန်မှုများနေခြင်းများတွင် 1mg/kg မှ2mg/ kg ကို ကြွက်သား သို့ သွေးပြန်ကြောမှတစ်ဆင့် ထိုးရပါမည် ။
Diphenhydramine (ဒိုင်းဖန်ဟိုက်ဒရာမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Tablet, Chewable, as hydrochloride:
စသဖြင့် ပြင်းအားအမျိုးမျိုးဖြင့်ရနိုင်ပါသည် ။
အနီးစပ်ဆုံးအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုကို ခေါ်ခြင်း သိုမဟုတ့် အနီးစပ်ဆုံးအရေးပေါ်အခန်းကိုသွားရောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမယ်။
အကယ်၍ဆေးသုံးရန်မေ့လျော့ခဲ့ပါက သတိရရခြင်းပြန်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ သတိရတဲ့အချိန်ဟာ နောက်တကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ နဂိုဆေးပမာဏထက် ၂ ဆပိုသုံးစွဲခြင်းမျိုးတော့ ရှောင်ကျဉ်ရပါမည် ။